Izakhelo ze-InDesign: Awona maPhepha eWebhu angcono kakhulu okufumana iSakhelo seSakhelo | Creatives Online
Kwizavenge ezidlulileyo, sithethile nawe malunga Ngenisa. Ayisiyiyo kuphela inkqubo apho izixhobo ezahlukeneyo enazo zininzi, kodwa inothotho lwe templates evela kwisiseko kwaye oko kukunceda ukuba usebenze ngcono kwiiprojekthi zakho.
Kule post, siza kukwazisa kwihlabathi le-InDesign templates. Siza kukucebisa ukuba zeziphi iitemplate onokuthi uzisebenzise ngamaxesha onke kwaye ngakumbi apho ziphi, zombini zisimahla kwaye zihlawulwe.
Hlala nathi kwaye ufumane okuninzi malunga nesi sixhobo esinika impumelelo enkulu kwicandelo le ukuyila.
1.1 Iintlobo zeetemplates
1.1.1 Iitemplates zemagazini yeRetro
1.1.2 Iitemplates ze-elektroniki
1.1.3 Iitemplates ezincinci
1.1.4 Iitemplate zokuhamba
1.1.5 Iitemplates ezinenjongo ezininzi
2 Iziza zetemplate ze-InDesign
2.2 Ezona template zintle zeDesign
2.5 Iimfihlo ze-InDesign
2.7 Uyilo Lwempahla
3.1 Uyilo kuyilo
Xa sithetha ngeetemplates, sithetha a iphepha eliyinkosi, oko kukuthi, uxwebhu oluqokelela lonke ulwazi kwaye luyilungelelanise njengoko sifuna. Izakhelo zivela kwi-a uxwebhu olutsha, kwaye zinokuba luncedo kakhulu xa ulungiselela iiprojekthi, kuba ezinye zazo ziza zichazwe kwangaphambili kunye nezikhokelo zokubeka iitekisi kunye nomfanekiso ukwenzela ukuba i-hierarchy yeetekisi phambi komfanekiso ube nokuhambelana okuthile,
Kukho iintlobo ezininzi zeetemplates, kuxhomekeke kwindlela ezibekwe ngayo, zinomsebenzi othile kwaye ziyilelwe kuphela loo mvelaphi. Nantsi eminye imizekelo yohlobo ngalunye lwetemplate ekhoyo.
Iitemplates zemagazini yeRetro
Izitayile zoshicilelo lwevintage zinokusebenza kakhulu kwaye ziyile. Ukulungiselela i-gradients, ukuthungwa kwesikolo esidala, kunye nombala othunyiweyo wombala unokutya ixesha. Olu hlobo lwetemplate ye-InDesign yeemagazini ezinesitayile sakudala, sele iza nemibala kunye nokwenziwa kwesitayile sokwenyani, ukukunceda wenze inkangeleko ye uyilo lwe-retro. Isiphumo sikholisa ukuthotywa kakhulu, ngakumbi ngendlela yokuba i-ultra-modern kunye nesitayile sakudala sidityaniswe kuyilo oluhle.
I-InDesign ayenzelwanga nje ukwenza iiplani zokuprinta, ngaba kunjalo? iqwalaselwe ngokugqibeleleyo ukuyila uyilo lwedijithali. Olu hlobo lweetemplates zemagazini, okanye inkxaso yopapasho lwe-elektroniki, ikuvumela ukuba uthumele iiprojekthi zakho njengefayile EPUBilungele ukujongwa kwiikhompyuter zedesktop kunye nezixhobo eziphathwayo.
Iitemplates zemagazini ephantsi ehlelekayo kwi-InDesign akuyomfuneko ukuba zibenokukhanya ukwenza impembelelo. Zilungele uluhlu olubanzi lweentlobo ezifana nefashoni, indlela yokuphila okanye ukuhamba. Le template ngokwenene ikuvumela ukuba ubonise iifoto ezintle kunye nococeko kunye nohlobo lwangoku.
Ukuba ukhangele into enempembelelo encinci kwaye inomdla, olu hlobo lwetemplate yephephancwadi lokuhamba ngumzekelo omhle wokudibanisa umbala wombane ophezulu kunye noyilo oluthemba lomxube onamandla oqinisekileyo ukuba uyawubamba. ingqalelo yabafundi. Ikwafanelekile kwezinye izihloko ezihambelana nokugxila okubandakanya njengeendaba zabantu abadumileyo okanye ukupheka.
Iitemplates ezinenjongo ezininzi
Iitemplates ezineenjongo ezininzi zinesitayile sangoku esixuba imifanekiso enomtsalane kunye nohlobo olukhulu lwe-sans-serif. Uyilo lwephepha le-spreadsheets kunokuba nzima ukuyiqonda ukuba uqala imagazini yakho ukusuka ekuqaleni. ukuba iitemplates zilungile ukuqala lo msebenzi unzima.
Njengoko usenokuba ubonile, ithempleyithi nganye yenzelwe uhlobo olwahlukileyo lwemagazini okanye indlela yokushicilela. Kuyamangalisa ukwazi ukuba, kuxhomekeke kwisitayile sethu kunye nendlela esisebenza ngayo iprojekthi yethu, kuya kuhlala kukho itemplate esifanelekileyo.
Nanga amanye amaphepha apho unokufumana khona ezi ntlobo zeetemplates, nokuba zihlawulwe okanye zisimahla, kodwa zihlala unazo.
Iziza zetemplate ze-InDesign
I-Stock InDesign, liphepha elineentlobo ezininzi zeetemplates zoyilo ushicilelo lwe-intanethi: iincwadi, iincwadana, iiflaya, iikhathalogu neemagazini. Nangona kunjalo, banikezela nge-5 kuphela kubo ngokukhuphela mahala. Ngaphandle koku, bafanele ukuphonononga njengoko unokufumana yonke into oyifunayo ngocofa nje olunye.
Ezona template zintle zeDesign
Eli phepha lineetemplates ezihlawulweyo, kodwa likwabonelela ngokukwazi ukukhuphela iitemplates ze-InDesign simahla. Ungazifumana kwiincwadana, iiflaya okanye iincwadana, iingxelo, ukuqalisa kwakhona, iimagazini, iikhathalogu, amakhadi eKrisimesi, njl.
Ngamnye wabo uneenkcukacha zefonti, imibala, ubungakanani, imifanekiso kunye nezinye izinto, kunye namaxwebhu afunekayo kunye namakhonkco kwiifonti zamahhala ezisetyenziswa kwimeko nganye ethile.
Ukuba ufuna ukukhuphela iitemplates zoyilo lwegraphic, okokuqala kufuneka wabelane ngazo kwaye ucofe kwenye yee-iyikhoni zenethiwekhi yentlalo eyahlukeneyo ebonisiweyo, okanye ulinde malunga nemizuzu emi-2 ukuze ikhonkco letemplate livulwe.
Kule webhusayithi imangalisayo, unamawaka eethemplethi ezifumanekayo ukuyila simahla (amakhadi oshishino, iiflaya, iikhathalogu, nantoni na oyifunayo). Unokukhangela kwimenyu yokukhangela iitemplates ngohlobo lwefayile, imveliso, umsebenzi kunye necandelo.
Uyilo lwabo luthambekele ngakumbi kwinto elula kunye neshishini, ukuba ujonge esi simbo ngokuqinisekileyo uya kusithanda. Ukukhuphela iitemplates udinga i-akhawunti, kwaye ngesicwangciso sasimahla ungakhuphela ukuya kuthi ga kwiitemplate ezi-3 zasimahla ngosuku.
IPagination liphepha eligqwesileyo lokudala amaxwebhu oyilo kwimizuzu embalwa, ukuqala kwifayile yedatha. Zizithempleyithi zoyilo lomhleli ezikumgangatho ophezulu.
Ukuba ufuna ukusebenzisa esi sixhobo kufuneka ulayishe umxholo wakho kunye nenkqubo efanayo mockups uxwebhu kuwe. Kodwa zifumaneka kuphela (iitemplates zasimahla) zokusetyenziswa ngeAdobe InDesign kunye nenkqubo yayo yokushicilela.
Eli phepha liphethwe yinkampani yeAdobe. Ukuba ukhangela iwebhusayithi yabo (leyo yeeMfihlo ze-InDesign) uya kufumana izixhobo ezininzi eziququzelela umsebenzi wakho njengomyili; awunayo kuphela iitemplates zoyilo lwegraphic, kunye nezifundo, iividiyo, iipodcasts kunye neziganeko.
Ibonelela ngeetemplates zasimahla kunye nezihlawulweyo kuphela kwiwebhusayithi yayo, eyokugqibela ngobhaliso lonyaka. Kukho ezinye iisayithi, ezifana Market Market, apho unokufumana khona amakhulu kunye namawaka eetemplates zoyilo lwamahhala, ezenziwe ngabaqulunqi abazimeleyo kunye ne-studios, abaye bathatha umsebenzi wokunceda umyili wokuqala.
I-Unblast liphepha eligqibeleleyo lokufumana iitemplate zanamhlanje kunye nekhwalithi zasimahla. Kuya kufuneka ucofe iqhosha lokukhuphela kwaye liya kukuthumela kwiphepha apho ukukhuphela ngokuthe ngqo kwetemplate oyikhethileyo. Yonke imisebenzi yakho iya kuyilwa ngokuchanekileyo, ilungele ukusiwa kwi ushicilelo lwe-intanethi.
Ezi templates zoyilo lwegraphic kulula kakhulu ukuzisebenzisa, kunye nezanamhlanje kunye nobuchwephesha. Ziyafumaneka kwiinkqubo ezahlukeneyo zokupapasha (QuarckXPress, Apple Pages okanye Microsoft Office) nakwezinye iifomati ezixhaswayo.
Kusenokungabikho iintlobo ezininzi kakhulu, kodwa oko bakunikezelayo ngokungathandabuzekiyo kunomgangatho ophezulu kunye nobugcisa. Ubulula abusoze bumelwe ngcono. Lelinye lamaphepha apho okulula kuninzi kakhulu, oko kukuthi, apho ukufumana isitayile sakho kunokuba lula kunokuba ucinga.
Lelinye lamaphepha afana nezakhelo ze-InDesign eziBalaseleyo. I-Pixeden idibanisa iitemplates ezihlawulwe kwiprimiyamu kunye nokukhutshelwa kwasimahla. Into enomdla kukuba iitemplates ezihlawulweyo zinexabiso eliphezulu lokukhuphisana.
Emva kokwazi ezinye zezona webhusayithi zibalaseleyo apho unokufumana khona olu hlobo lweetemplates, kufuneka wazi ukuba ziyilwe ngenjongo yokucwangcisa iiprojekthi zendalo yokuhlela.
Uyilo alukho ngaphezu kwe umsebenzi uyilo lokuhlela, olunoxanduva lokuququzelela okubhaliweyo, okubonakalayo kwaye kwezinye iimeko umxholo we-audiovisual kwisithuba. imithombo yeendaba eprintiweyo kunye ne-elektroniki, njengeencwadi, amaphephandaba kunye neemagazini.
Oko kukuthi, inxulumene nokusasazwa kwezinto kwindawo ethile kwiphepha, ngelixa uyilo lomhleli lubandakanya izigaba ezibanzi zenkqubo, ukusuka kwiprojekthi yomzobo ukuya kwiinkqubo zemveliso ezibizwa ngokuba yi-prepress (ukulungiselela ushicilelo), cofa ( ukushicilela) kwaye post-press (ukugqiba). Nangona kunjalo, ngokubanzi yonke inkalo yegraphic yopapasho kunye nomsebenzi wentatheli waziwa ngegama elithi ubeko.
Umyili wanamhlanje (umyili wesakhiwo) kufuneka abe qeqesho kunye nemfundo kwimigaqo yoyilo kunye nokungawushiyi umsebenzi woyilo kulonwabo nje. Ukusetyenziswa kokuqonda imiba eyahlukeneyo yonxibelelwano ebandakanyekayo ekulandeleni izinto zolwazi kwiphepha kufuna ulwazi lobuchwephesha kunye namava ukuhambisa umyalezo ngokufanelekileyo.
Ingcamango ephambili yokwakheka kwewebhusayithi ibandakanya ukuhanjiswa kwezinto zephepha, oko kukuthi, iitekisi, imifanekiso, amakhonkco kunye nemizobo ecwangciswe ngocwangco. Nabani na owenza lo msebenzi ngendlela yobungcali ngumzobi wegraphic. Ukuyila iwebhusayithi kuthetha ukunika ifomathi ethile kuzo zonke izinto zephepha.
Ngokuqinisekileyo, ngaxa lithile ebomini bethu, uye wabona inani elingenasiphelo lamaphephancwadi okanye amaphephandaba. Zonke iitekisi ezibhaliweyo kunye nala maphepha amakhulu zikhutshwe ngeetemplates. Kuyinyani ukuba i-InDesign inezixhobo eziyimfuneko zokusasazwa ngokuchanekileyo kweetekisi phambi kwemifanekiso, kodwa iitemplates zikwanceda ukuphuhliswa kolwazi kunye nokufunda ngokuchanekileyo.
Ngoku lixesha lokuba ubambe enye yeetemplate kwaye uqalise ukuyila iitekisi zakho zokuqala kunye nazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iitemplate ze-InDesign
Iipowusta zesinyithi: zithini kwaye zithengwa phi?
Iincwadana eziphindaphindwa kathathu